Art Sky | MRTV-4
- Rap Gunရဲ့ "သူ့ကျွန်မခံ အနုပညာ" Audio CD စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား ၊
- Photographer Kan Su Ho ရိုက်ကူးနေတဲ့ Sunday Journal Cover အတွက် Model နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းနှင့်ရိုက်ကူးနေမှု Photo Making
Tarus V Productionမှ ထုတ်လုပ်၍ ဒါရိုက်တာအောင်မြတ် ရိုက်ကူးသွားမည့် "မနေ့ကဖြစ်သည်" Mini Series ကန်တော့ပွဲပေးခြင်းအခမ်းအနား
"အနူးဘစ်"ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြိး Press Show အထူးပွဲ ပြသခြင်း အခမ်းအနား
-R ဇာနည် ရဲ့ Hit Interview
-Myanmar DJ Charity Foundation မှ
ရေဘေးအတွက် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်း
-တေးသံရှင် ရန်ရန်ချမ်းရဲ့ MTV ရိုက်ကူးနေမှုများ
-Myanmar Art Organization Central မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Thanlyin
2016 Art Exhibition ပွဲမှပန်းချီအနုပညာလက်ရာများ
-ထက်ထက်ထွန်းရဲ့ Hit Interview
Welcome To Miss Universe Myanmar 2017
-Beyond the 21 Duet Live ၂၁ နှစ်အလွန် စုံတွဲဂီတဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပမည့်အပေါ် စာနယ်ဇင်း ရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနား
-တေးသံရှင် PTO ရဲ့ "ချစ်စခင်စကြင်နာစ" Album စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား၊
- Miss Goldenland Myanmar 2016 Top Model Challenge ပွဲအခမ်းအနား
- မြန်မာနိုင်ငံ ရေဆေးအသင်းရဲ့ ၁၁ ကြိမ်မြောက် ရေဆေးပန်းချီပြပွဲ
-MODA Magazine ရဲ့ စက်တင်ဘာလထုတ် Fashion ကဏ္ဍ အတွက် Model တင်စန္ဒာမျိုး, မော်ရိန်းလုဆန်တို့နှင့် Photo ရိုက်ကူးနေမှု Photo Making
Wedding Palace Studio ရဲ့ Wedding Catalogue Photo Makingလေးတွင်မ်ာဒယ်သရုပ်ဆောင်မေမြတ်နိုးကပါဝင်ရိုက်ကူးပေးနေပုံနှင့် "ချောကြတယ် ၃၆၀” ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးပုံဖော်နေမှုများအကြောင်း
အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုးနန္ဒာထက် ရဲ့ “အသက်သုံးဆယ်ကျော်တဲ့အခါ” စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် စာကြည့်တိုက်နှင့် တောင်တန်းဒေသများကို “ချစ်သော ကမ္ဘာမှာ” အကျိုးပြုစာအုပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားမြင်ကွင်းနှင့်သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကဏ္ဏအကြောင်း
Orchid Hotle မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ တေးသံရှင်အဆိုတော်ထျန်ခေးရဲ့ ရိုးသားခြင်းရလဒ်ဆိုတဲ့ တေးစီးတီးအယ်ဘမ်သစ် စာနယ်ဆင်းမိတ်ဆက်ပွဲလေး မြင်ကွင်းအကြောင်း
လောကနတ်ပန်းချီပြခန်းမှာကျငိးပပြုလုပ် တဲ့Atmosphere In Watercolorဆိုတဲ့ရေဆေးပန်းချီပြပွဲလေးအကြောင်းနှင့် သူတို့ဘာလုပ်နေလဲအစီအစဉ်မြင်ကွင်းများ
ထာဝရအမေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရဲ့ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်ကမြင်ကွင်းလေးများ
ကံ၏ အရှင် ၀ဋ်ကြွေး၏သခင် ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကူးမှုအတွက် ကန်တော့ပွဲပေးခြင်းအခမ်းအနားမှ မြင်ကွင်း များ
ပို၍လှသော မနက်ဖြန် Mini Series Shooting Making မြင်ကွင်းအကြောင်း
သရုပ်ဆောင်ပက်ထရစ်ရှာပြောကြားထားတဲ့Hit Interview မေးခွန်းလေးတွေ အကြောင်း
လှည်းတန်းစင်တာမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ၀ိုင်းလေးရဲ့ Sefile DVD ကာရာအိုကေ အယ်လ်ဘမ် Promotion ပွဲအခမ်းအနားအကြောင်း
ရဲရင့်အောင် ပြောကြားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ အနုပညာ နဲ့ပတ်သတ်သောစကားသံ အကြောင်း
ရွှေမှုန်ရတီ၊ မြနှင်းရည်လွင်တို့က မော်ဒယ်အဖြစ်ရိုက်ကူးနေတဲ့ Photo Shooting Making အကြောင်း
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲရေးအတွက် Forum ပြုလုပ်သွားမည့်အကြောင်း စာနယ်ဇင်းအသိပေးပွဲအခမ်းအနားက မြင်ကွင်း
နန်းခင်ဇေယျာရဲ့ Hit Interview
စိန်မဟာသဘင်၏ စိန်ပွဲတော် စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်:တွေနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု ပါဝင်ရိုက်ကူးနေတဲ့ MODA Photo Shooitng Making၊
"သုဒြာ"ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ ပွဲဦးထွက်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သွားမည့် Reflection ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကန်တော့ပွဲပေးသည့် အခမ်းအနားမြင်ကွင်း၊
- Miss Myanmar International Top 20 စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲနဲ့ Sponsor Company များနဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနား
- မယ်မယ်ထိပ်နှင့် အမွှေစံအိမ်ရိုက်ကူးပုံဖော်နေတဲ့ Shooting Making
-People Megazine အတွက် ဒေါင်း နဲ့ Photo ရိုက်ကူးမှု
- M.M.Thein(Pathein)`s 4th solo show Art Exhibition အခမ်းအနား
- ဒေါင်း ရဲ. Hit Interview
-တေးသံရှင် လူလေးရဲ့ “ဘ၀နဲ့ ဆန္ဒ” တေးစီးရီးမိတ်ဆက်ပွဲ|
-Myanmar Artists Orgranization (Yankin) မှ ကျင်းပပြုလုပ်သော "9Power" Art Exhibition အခမ်းအနား|
-" ဒါရိုက်တာ ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင်ရိုက်ကူးနေတဲ့ မောင့်ကို ဘယ်တော့မှ မမုန်းဘူး " ဇာတ်ကားရဲ့ နောက်ကွယ်က ဖန်တီးမှုတို့ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
- သရဖူမဂ္ဂဇင်းအတွက် ဓါတ်ပုံအေးဇော်မိုးမှ “လူးလူ ” နဲ့ Photo ရိုက်ကူးနေမှုများ
- Gallery Café မှ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ The Aesthetic Touch Exhibition အခမ်းအနားအကြောင်း|
ဆရာမြတ်ခိုင် အသက်(၆၀)ပြည့်မွေးနေ့ပွဲအခမ်းအနား နဲ့အတူ
"မကြီးစန်းနှင့် သူ၏ချစ်သူများ" Press Show အခမ်းအနားမြင်ကွင်း
hotographer Kan Su Ho ရိုက်ကူးနေတဲ့ People Magazine ရဲ့ Photo Shooting Making နဲ့
Miss Myanmar International 2016 Audition မြင်ကွင်း
ဒါရိုက်တာကိုပေါက် ရိုက်ကူးနေတဲ့ ချစ်ရလွန်းသူ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေမှု Shooting Making
The Myth ရဲ့ အလင်းတေး Alblum စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ
အာင်ရဲလင်းနဲ့ Hit Interview
ဓါတ်ပုံ ပီတာမင်းဆက်ကနေ မြင်ကွင်းမဂ္ဂဇင်းအတွက် မေဂရေ့စ်နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးနေတဲ့ Photo Making
"Mirror" Wedding Dress, Makeup and Photo Studio ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
သရုပ်ဆောင် လိုင်လာခန်း ဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့ Rhythm & Style Int'l Academy ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
- ဒါရိုက်တာအောင်မြတ်ရိုက်ကူးနေသည့် တေးသံရှင် ဇေရဲ ရဲ့ MTV Making
- အဖေ့ကျောင်း ဇာတ်ကား အထူးပွဲပြသမိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနား မြင်ကွင်း၊
- Gongs & Skins2" The Second International Percussion Festival "တူရိယာစုံဂီတဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ့်အကြောင်း၊
- MAOC Art Gallery မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ "Comic For Art 3rd Exhibition" ပြပွဲအခမ်းအနား မြင်ကွင်း၊
*ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင် ရိုက်ကူးပုံဖော်တဲ့ G String မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေသော မြင်ကွင်းစတာတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်
*Dior မဂ္ဂဇင်းရဲ့ Wedding ကဏ္ဍအတွက် ဓါတ်ပုံ ကိုကျော်ရွှေမင်းကနေ နွယ်ဒါလီထွန်း၊ L ဘောက်နူးတို့နဲ့ ရိုက်ကူးနေတဲ့ Photo Making ကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
*Miss Golden Land Myanmar 2016 Beauty Pageant ရဲ့ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား မြင်ကွင်း
*တေးသံရှင် ငြိမ်းဆုသာ ရဲ့ “ကုန်လွန်ခဲ့သော အချစ်ဦး” တေးအယ်ဘမ် စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား
*တေးသံရှင် ရှမ်းပေါက် နဲ့ လူသားတို့ရဲ့ “ပိုးတုံးလုံးလူသား” တေးစီးရီးမိတ်ဆက်ပွဲ
၀ိုင်းလေးရဲ့ " Selfie" အယ်ဘမ် DVD, Karaoke နှင့်ပတ်သက်ပြီး စာနယ်ဇင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနား
ပန်းချီဆရာကြီးများနှင့် New Vision မှာ ပန်းချီဆရာ၊ ဆရာမများ၊ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏ (၅) ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းပန်းချီပြပွဲ၊
အိပ်မက်ဆုံရာ (ရာသက်ပန်) Season -3 ရဲ့ Winner လူးလူ နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားမှုများ
- ဒါရိုက်တာ ဗန်းကြီး ရိုက်ကူးနေတဲ့ "ပီယဆေး" ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေမှု မြင်ကွင်းပုံရိပ်များ
-စန္ဒီမြင့်လွင် အနေနဲ့ One Lady Show ထပ်ပြီးလုပ်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိ မရှိ ဆိုတဲ့ Hit Interview -တေးသံရှင် အောင်သျှံဝိုင်း (ကျိုက်မရော)ရဲ့ မောင်တို့ ချယ်ရီမြေက မမမိုး တေးအယ်ဘမ် စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား မြင်ကွင်း
-Ma May Lay(BMCC) ဦးစီးကျင်းပသော Hip Hop Show ပွဲ အခမ်းအနား မြင်ကွင်း၊
-ဓာတ်ပုံ မိုးကိုဦး ဖန်တီးရိုက်ကူးနေတဲ့ ရဲရင့်အောင်၊ သဉ္ဖာနွယ်ဝင်း ၊ ယုသန္တာတင်တို့ ရဲ့ Photo Making ၊
- Music Live Tonight ရိုက်ကူးနေမှုမြင်ကွင်းများ
- Influrence Rock 2016 ပွဲအတွက် Band များ၏ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေမှုများ(Epi-2)Idiots Band Rehersal
-ဒါရိုက်တာ နေပိုင်ရိုက်ကူးနေတဲ့ "ပွင့်လိုက်တာမအာလို့" ဇာတ်ကားအား မြင့်မြတ်၊ စံရတီမိုးမြင့် တို့နဲ့ ရိုက်ကူးနေမှုShooting Making၊
** I'm 33(Birthday Art Event) Installation Art ပွဲအခမ်းအနား၊
** သရုပ်ဆောင်ဆုပန်ထွာရဲ့မကြာခင်ကာလအတွင်း လူ့လောကထဲကို ရောက်ရှိလာတော့မယ့် သားဖြစ်သူအား ကြိုဆိုမှု အခမ်းအနား
** Influrence Rock 2016 ပွဲအတွက် Band များ၏ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေမှုများ(Epi-1)Reason Band Rehersal တို့ ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ
** Music Live Tonight အစီအစဉ် ရိုက်ကူးနေမှု (ပထမအပိုင်း)၊
** ဒါရိုက်တာ ဂျိုး ရိုက်ကူးနေတဲ့ The Loser ဇာတ်ကား ရဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်း ရိုက်ကူးနေမှု Shooting Making၊
-ဇင်ရော်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေထုတ်လုပ်သွားမယ့် "ထာဝရအမေ" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကန်တော့ပွဲပေးခြင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား ဒီဇာတ်ကားမှာအကယ်ဒမီနေတိုး၊အကယ်ဒမီဝတ်မှုံရွှေရည်၊အကယ်ဒမီမေသန်းနု၊အကယ်ဒမီရဲအောင်အပါအ၀င်အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
- Scion 4th Art Exhibition(Group Show)
- ဇူလိုင်လ(၂၁)ရက်နေ့ကနေ(၂၄)ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ခေတ်ပြိုင်ရိုးရာဟန်ပန်းချီပြပွဲ
- ဒါရိုက်တာကျော်ဇောလင်း(အတွေးပုံရိပ်)ပုံဖော်ထားပြီး အရိုင်း၊မိုးပြည့်ပြည့်မောင်၊ နှင့်အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ "စားတယ်(ကိုတင့်တို့စူပါရပ်
နောက်ဆုံး Photos Making ဗီယက်နမ်မော်ဒယ် ငုရင်ထရန်ဟုရန်မေ နှင့် Photos Making ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာဘယ်လိုတွေပုံဖော်ရိုက်ကူးခဲ့သလဲစတာတွေနဲ့အတူ
ဇူလိုင်လထဲမှာထွက်ရှိလာတော့မယ့် Idiots အဖွဲ့အနေနဲ့ ခွေအသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေမွန်ရဲ့စကားသံတွေကိုကြားသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
-"အိမ်မက်ဆုံရာပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်များရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့သူ တေးသံရှင် သားဂန်း နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားမှုများ"
"မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာ ဒါရိုက်တာနေပိုင် မှ ဇေရဲထက်၊စံရတီမိုးမြင့်တို့နဲ့""တောက်တောက်ကြော်""ဗီဒီယိုဇာတ်ကားရိုက်ကွင်းပေါ်မှမြင်ကွင်းများ"
- တေးသံရှင်သစ် ဌေးလင်း ရဲ့ "ကလေးပန်းချီ" အမည်ရှိတေးစီးရီးသစ်မိတ်ဆက်ပွဲ
-ဓါတ်ပုံအောင်ကျော်မိုးရဲ့စတူဒီယိုမှာ Miss Now How 2016 ပြိုင်ပွဲမှ First Runner Up ဆုရရှိထားသူ သုသုမြတ်နိုး နဲ့ Photos Making မြင်ကွင်းများ
-ဒါရိုက်တာသားညီရိုက်ကူးဖန်တီးထားပြီး လွှမ်းပိုင်၊အိချောပို တို့ပါဝင်တဲ့ "ကြွေ" ဇာတ်ကားရိုက်ကွင်း ပေါ်မှာဘယ်လိုတွေဖန်တီးရိုက်ကူးခဲ့ကြသလဲ
- Hit Interview ကဏ္ဍ(ခင်လှိုင်)
- ဓါတ်ပုံမင်းကိုနဲ့ ဆုသက်ပိုင်မှူး တို့ရဲ့ Photos Making ကိုဘယ်လိုပုံဖော်ရိုက်ကူးခဲ့သလဲ
-Cloud 31 ပန်းချီခန်းမမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပန်းချီဆရာနန္ဒကြယ်စင်၊ပန်းသစ်၊သက်စု တို့ရဲ့ Unforgotten Art Show ပွဲမှအကြောင်းအရာများ
-Fashion Magazine အတွက် ထွန်းကိုကို၊အမရာငြိမ်းတို့နဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာ Fred တို့ရဲ့Photos Making ရိုက်ကွင်း
-ဗီဒီယိုရိုက်ကွင်းပေါ်ကပုံရိပ်များအဖြစ် "ရွှေစည်တော်ထုတ်လုပ်ရေးကနေထုတ်လုပ်သွားမယ့် ""ဒီလူကြီးကိုမုန်းတယ်"" ဇာတ်ကားရိုက်ကွင်းမှာသရုပ်
ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဖြိုးငွေစိုး၊ငွေမှုံရတီ၊ကျော်ထူး တို့နဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်ကပုံရိပ်များ"
-Hit Interview ကဏ္ဍ အနေနဲ့ကတော့ "ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်ဖန်တီးနေတဲ့ ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်
""ဘာကြောင့် facebook ပေါ်ကနေ Hints တွေပေးပြီးပရိသတ်တွေကိုအသိပေးမှုတွေပြုလုပ်တာလဲ""
-"ဓါတ်ပုံဆရာ မင်းခန့်ကျော် ရဲ့ Idea Magazine အတွက် ချာလီ နဲ့လှည်းတန်းရထားလမ်းမှာPhotos Making
-သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ "ဒါရိုက်တာသိန်းဟန်(ဖီးနစ်)ရဲ့ ""ရိုက်လိုက်ပါဦး ဒုန်းဒုန်းဒုန်း"" Press Show ပွဲအခမ်းအနား...အဆိုပါဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်များအဖြစ် ခန့်စည်သူ၊ဖွေးဖွေး၊ရွှေရည်သုန်သုန်၊ ခင်လှိုင်၊ဒိန်းဒေါင်၊ဇော်ဝင်းနိုင်(မန်း)၊ ငှက်ပျောကြော်၊သီဟဖြိုးနှင့်ဟာသသရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။"
*အကယ်ဒမီနေတိုး၊အကယ်ဒမီ ၀တ်မှုန်ရွှေရည် ၊အောင်ရဲလင်းတို့နဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာမိုးကိုဦးတို့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Photo Making
*အနုပညာမိုးကောင်းကင်ပရိသတ်ကြီးသိရှိချင်နေတဲ့ အဆိုတေ်ာ ရဲရင့်အောင် ရဲ့ နောက်အခွေအတွက်ပြင်ဆင်နေမှုများနှင့်MTV ရိုက်ကူးပြီးစီးမှုများကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားမှု
*ဓါတ်ပုံ Kan Su Ho နဲ့ ၀ါဆိုမြင့်အောင်(မို့မို့မြင့်အောင်တူမ)တို့ "ရတီမဂ္ဂဇင်းအတွက် Photos Making ရိုက်ကွင်းမှပုံရိပ်များ
-Orchid Hotel မှာဇူလိုင်လ(၁၈)ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုတော် လုလင်ပျို ရဲ့ "ငါပဲစူပါစတား" စီးရီးမိတ်ဆက်ပွဲ
မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းရုပ်ရှင်ရုံ(၁၀၀)ဆောက်လုပ်မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီး "အကယ်ဒမီလူမင်း၊ယုသန္တာတင်၊သဉ္ဖာနွယ်ဝင်း၊ဒါရိုက်တာနေပိုင် တို့ရဲ့အမြင်တွေပြောပြထားမှုများ
-နောက်ဆုံး ရိုက်ကွင်းပေါ်ကမြင်ကွင်းများမှာ ဒါရိုက်တာကိုဇော်(အရုဏ်ဦး) ရဲ့ ဇွတ်ကျား အမည်ရှိရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းမှာဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုပုံဖော်ရိုက်ကူးနေလဲဆို တာတွေကိုကြည့်ရှုခံစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
-"Ayerwon Art Gallery မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ ပန်းချီဆရာကြီးဦးလွန်းကြွယ်အပါအ၀င်ပန်းချီဆရာ(၂၅)ဦးပါ
၀င်တဲ့ ""The Outdoor Days Art Exhibition"" ပွဲ" တို့နှင့်အတူ
သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေ၊ရတနာဗို တို့နဲ့ဓါတ်ပုံဆရာ မိုးကိုဦး တို့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Photos Making ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်များ
-လောကနတ်ပန်းချီခန်းမမှာပြုလုပ်နေတဲ့ Aung Naing Maung 2016 12th Solo Show ပန်းချီပွဲ
-ဒဂုံစင်တာ(၂)မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တေးသံရှင်သစ် မိန်မိန် ရဲ့ "18" အမည်ရှိစီးရီး Promotion ပွဲအကြောင်းအရာများ
*Exclusive Interview ကဏ္ဍ
-တေးသံရှင် Gae Gae နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားမှုများ
-ပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်ကိုဖမ်းစားထားနိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်သိန်းတန် ရဲ့အ၀တ်အစားဒီဇိုင်း၊ဆံပင်ဒီဇိုင်းတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုတွေစီမံထားသလဲ ဆိုတာကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားမှု
ဇူလိုင်လ(၁၅)ရက်နေ့က Orchid Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ PPAM Professional Photographers Association of Myanmar (မြန်မာနိုင်ငံဓါတ်ပုံပညာရှင်များအသင်းမိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနား)
-ဓါတ်ပုံ မိုးကိုဦး နဲ့ ရွှေရည်သုန်သုန် တို့ရဲ့ Photos Making ရိုက်ကွင်းပေါ်ကပုံရိပ်များ
-Hit Interview ကဏ္ဍအဖြစ် "X Box ၊ စန္ဒီမြင့်လွင့် (အချစ်ရေး) ၊ အကယ်ဒမီပြေတီဦး (၂၀၁၇ခုနှစ်မှာဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်
-Myanmar Event Park မှာပြုလုပ်နေတဲ့ X Factor Myanmar Judges လူရွေးချယ်ပွဲ
-"ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေအသက်(၈၀)ပြည့်အမှတ်တရအဖြစ်ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ Homage To My Mentor U Win Pe
အနုပညာမိုးကောင်းကင် (၁၅.၇.၂၀၁၆) Art Sky Art Sky
-Step of Faith လို့အမည်ပေးထားတဲ့ Group Arts Exhibition ပွဲ
-အာသောက၊မင်းဇေယျ တို့ရဲ့ "ဓာတ်တူနာမ်တူ" စီးရီးမိတ်ဆက်ပွဲမှပုံရိပ်များ
-"ပန်းချီဆရာ "၀လုံး" ရဲ့(၄)ကြိမ်မြောက်တစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲအဖြစ်လောကနတ်ပန်းချီခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့
The Legend of Happiness 4th Solo Show"
-သူတို့အမြင် ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာ "ဒါရိုက်တာဂျိုး အကယ်ဒမီပြေတီဦး
အကယ်ဒမီမင်းဦး" တို့က မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်း မှာ ရုပ်ရှင်ရုံ ၁၀၀ တည်ဆောက်မည့်အပေါ်
-ဗီဒီယိုရိုက်ကွင်းပုံရိပ်များအဖြစ် "ဒါရိုက်တာသားညီရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပြီး သရုပ်ဆောင်များအဖြစ်အကယ်ဒမီမင်းမော်ကွန်းအကယ်ဒမီခိုင်သင်း
- အွန်လိုင်းပေါ်မှာပရိသတ်များစွာရဲ့အားပေးမှုရရှိထားသလို ရုံတင်ရာမှာလည်းပရိသတ်များစွာလာရောက်အား
ပေးခဲ့တဲ့ "ဖေစ့်ဘုတ်ရွာ" Press Show ပွဲသရုပ်ဆောင်များအဖြစ်အကယ်ဒမီကျော်ရဲအောင်၊အကယ်ဒမီလူမင်း၊အကယ်ဒမီမြတ်ကေသီအောင်၊အကယ်
-MRTV4ရုပ်သံလိုင်းမှာပြသခဲ့တဲ့ လူရည်ချွန် ဇာတ်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်များရဲ့အားပေးမှုတွေထပ်မံ ရရှိခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် "နေအဉ္ဇာရာ" နဲ့တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားမှု
** အိမ်မက်ဆုံရာ Season7မှတေးသံရှင်(၈)ဦးပါဝင်သီဆိုထားတဲ့ Season7အမည်ရှိ New Album စာနယ်ဇင်းသတင်းမီဒီယာများနဲ့မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား" အကြောင်းအရာ များ
**တေးသံရှင်ဝိုင်းလေးရဲ့ Wyne Lay Selfie DVD Karaoke Album ထွက်ရှိရန်အတွက် Coming Soon ရိုက်ကူးခဲ့မှုအချို့ ဖြစ်ပြီး သီချင်း(၁၂)ပုဒ်ပါဝင်တဲ့ DVD ဖြစ်ကာ Forever BEC Tero ကဦးစီးပြီးထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း
** သရုပ်ဆောင်၅၃ဦး၊ဒါရိုက်တာ၃၆ဦးတက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာဖွင့်လှစ်သင်ကြားသွားမယ့် ၁/၂၀၁၆ သရုပ်ဆောင်နှင့်ဒါရိုက်တာသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
"ဇူလိုင်လ(၂)ရက်နေ့ကနေ(၁၀)ရက်နေ့အထိ Think Art Gallery မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ့်
Think to Think Art Exhibition ပန်းချီပြပွဲ"
နောက်ဆုံး Hit Interview ကဏ္ဍမှာအနုပညာသက်တမ်းကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကောင်စရိုက်များစွာကိုသရုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ "အကယ်ဒမီခိုင်သင်းကြည်
ပန်းချီဆရာအောင်ခန့်ကျော် ရဲ့ First Solo Show အဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Beauty From Inside ပန်းချီပြပွဲ
"တေးသံရှင် နေချို ရဲ့""လူတစ်ယောက်ရောက်နေတယ်"" Audio CD စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများနဲ့မိတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့မှုများ"
ပပြုလုပ်နေတဲ့ Beautiful Form 5th Solo Show ပန်းချီပွဲ"
ရွှေတိဂုံဘုရားမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ "မယ်မယ်ထိပ်နှင့်အမွှေစံအိမ်" အမည်ရှိ Mini Series မှာ သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီခိုင်သင်းကြည်၊ဟိန်းထက်၊မုဏ်း၊ဆုဝတီ၊ပိုးကြာဖြူခင်၊မေဧကရီထူး၊သက်ဦးကို တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကန်တော့ပွဲပေးအခမ်းအနား
ဇူလိုင်လ(၄)ရက်နေ့ကမြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံမှာမွေးနေ့အလှူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တေးသံရှင် ဟဲလေး ရဲ့မွေးနေ့အလှုမြင်ကွင်းများ
ဒါရိုက်တာအောင်မြတ်ရိုက်ကူးမည့် "မနေ့ကဖြစ်သည်" အမည်ရှိ Mini Series အတွက် Myanmar Events Park မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့မှုများ
ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် အေးမြတ်သူ ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများ (၂)
MAOC Gallery မှာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ 2016 Okkalapa Group Show ပန်းချီပြပွဲ
တေးသီချင်းသံစဉ်သစ်များကိုဖန်တီးပုံဖော်ထားတဲ့ လူလိမ္မာလေးများ လို့အမည်ပေးထားတဲ့ စီးရီးစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ
ဂျုံခင်းပေါ်ကကျီးကန်းများ အမည်ရှိလူငယ်တေးသံရှင်များရဲ့ တေးစီးရီးသစ်စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ
-ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် အေးမြတ်သူ နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားမှုများ (၁)b
- တေးသံရှင် ပဲပဲ ရဲ့ "ရင်ခုန်ခြင်းများနဲ့" တေးစီးရီးစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲမှမြင်ကွင်းများနဲ့အ တူ
- ဓါတ်ပုံအောင်ဇော် ရဲ့ Fashion Magazine အတွက် အကယ်ဒမီမေသန်းနှ၊မြနှင်းရည်လွင် တို့နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့မှုတို့နှင့်အတူ
- ဒါရိုက်တာဂျိုး ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ "အချစ်၏အဆိပ်" ဗီဒီယိုဇာတ်ကားရိုက်ကွင်းမှာအကယ်ဒမီမင်းဦး၊ဇွဲနိုင်ဝင်း၊နန်းဆုဦးတို့နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့မှုများ
- ဗီဒီယို Preview ကဏ္ဍမှာ "Info9ထုတ်လုပ်ရေးကနေဇူလိုင်လ(၁)ရက်နေ့ယနေ့မှာဖြန့်ချီသွားမယ့် ""ရင်ထဲမှာနေကြာတွေပွင့်နေ"" ဗီဒီယိုဇာတ်ကားအကြောင်း
လောကနတ်ပန်းချီပြခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ Art Strike Against Dual Exhibition ပြပွဲအကြောင်းအရာများ
- Bo Bo Music Production Anniversary Audio CD Vol 1/2 Promotion Show ပွဲအခမ်းအနား
- အကယ်ဒမီနေတိုး အကယ်ဒမီဝတ်မှုန်ရွှေရည် တို့ရဲ့လက်တလောပရိသတ်စိတ်ဝင်စားနေ သည့်အကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်ပြောကြားထားမှု (Hit Interview)
ဒါရိုက်တာအောင်မြတ်မှ အောင်ထက်နဲ့မိန်မိန်းတို့နဲ့ MTV Making ပုံဖော်နေမှု
တေးသံရှင်သစ် ရိုးရဲ ရဲ့ "လရောင်ဖမ်းစားခြင်း" တေးစီးရီးမိတ်ဆက်ပွဲ
"ဒါရိုက်တာ ပွင့်သိင်္ဂီဇော် ရဲ့ ""ကလေးတို့အဖေ"" လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ ပြေတီဦး၊ပက်ထရစ်ရှား တို့နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့မှု
ဇူလိုင်လ(၃)ရက်နေ့မှာစတင်ဖြန့်ချီသွားမယ့် စံပီး ရဲ့ God Bless Myanmar အမည်ရှိတေးစီးရီးမိတ်ဆက်ပွဲမှပုံရိပ်များ
Ayerwon ပန်းချီခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ Ayerwon Water Colour Art Exhibition ပန်းချီပြပွဲအခမ်းအနား
"စိမ်းဝါနီ ထုတ်လုပ်ရေးမှ ဇွန်လ (၂၇) ရက်နေ့တွင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီခဲ့သော "ကင်ဆာ" ဗီဒီယိုဇာတ်ကား\_
အနုပညာမိုးကောင်းကင် (၂၉ - ၆ -၂၀၁၆)
"ပူပူနွေးနွေး 2016 Miss Myanmar World Winner ဆုရှင် Bella နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Moda Magazine Photos Making ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်အချို့"
The Best Melody World 2013
** ဓါတ်ပုံ Kan Su Ho ရဲ့ Moda Magazine Photos Making ကဏ္ဍမှာ မော်ရိန်း၊အိန်ဂျယ်လမုန် တို့နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့မှုတို့နဲ့အတူ
**ပရိသတ်များအမြဲစိတ်ဝင်တစားရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ "သူတို့ဘာလုပ်နေလဲ"
**တေးသံရှင် ဟန်နီမောင်မောင် ရဲ့ "ဒါလားယောကျာင်္း"တေးစီးရီးစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ
**ဇွန်လ(၂၆)ရက်နေ့က သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ခိုးဆိုးလုနှိုက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Press Show ပွဲအခမ်းအနားအကြောင်းအရာများနှင့်အတူ
**တေးသံရှင် သားကြီးရဲ့ "ကောင်းသောနေ့" တေးစီးရီး Promotion ပွဲမြင်ကွင်းများ
**ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာတရားဝင်ဖြန့်ချီခြင်းပြုလုပ်မယ့် သားစိုး ရဲ့" ရောသမမွှေ "တေးစီးရီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
အနုပညာမိုးကောင်းကင် (၂၇ - ၆-၂၀၁၆)
- ပရိသတ်များရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်တေးသီချင်းသီဆိုမှုများနဲ့ပုံဖော်မှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့ "၀ါဆိုမိုးဦး နဲ့တွေ့ဆုံခိုက် မေးမြန်းထားမှုလေးတွေကိုကြည့်ရှုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။"
အနုပညာမိုးကောင်းကင် (၂၇ - ၆ - ၂၀၁၆)
- ဓါတ်ပုံဥာဏ ရဲ့(Health Digest Journal) Photos Making ကဏ္ဍအတွက် ထက်ထက်ထွန်း၊ပိုးစန္ဒာခင် တို့နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့မှု"တို့နဲ့အတူတူ
ဓါတ်ပုံ မင်းခန့်ကျော် နဲ့ Alice Ong တို့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Fashion Magazine Photos Making ရိုက်ကူးခဲ့မှုပုံရိပ်များအပါအ၀င်
အနုပညာမိုးကောင်းကင် (၂၇- ၆ -၂၀၁၆)
- "လောကနတ်ပန်းချီခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Soe Hnin Aung (SNA)2nd Solo Show ပွဲ"
- "တေးသံရှင်သစ်များဖြစ်ကြတဲ့ ချစ်ကို၊၀ူပေါက် တို့ရဲ့ ""နွေတစ်ညနှင့်အလွမ်းငှက်တစ်ကောင်"" Audio CD စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ"မှ အကြောင်းအရာများb
- MRTV -4ရုပ်သံလိုင်းကနေစတင်ပြသတော့မယ့် Forever Blossom မှရိုက်ကူးထားတဲ့ Music Live Tonight အစီအစဉ်ရိုက်ကူးနေမှုများ
- The 8th The Exhibition of accomplisbment Art New Zero art class သင်တန်းဆင်းပန်းချီပြပွဲ
- ဒါရိုက်တာပြည်ဟိန်းသီဟရိုက်ကူးထားပြီး "ယင်မနားတဲ့လင်မယား" လို့အမည်ပေးထားကာ သရုပ်ဆောင် ဟိန်းဝေယံ၊သဉ္ဖာဝင့်ကျော်၊ခင်လှိုင်၊
- ဇွန်လ(၂၃)ရက်နေ့ကမွေးနေ့ကျရောက်ခဲ့တဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့် ရဲ့မွေးနေ့ဆွမ်း
တေးသံရှင် Phoe Aung ရဲ့ 2004-2003 တေးစီးရီးထွက်ရှိခြင်းစာနယ်ဇင်းပွဲအခမ်းအနား
လာမယ့်ဇူလိုင်လ(၃)ရက်နေ့မှာ ထုတ်လွှင့်ပြသတော့မယ့် Forever Blossom ကနေရိုက်ကူးထားတဲ့ Music Live Tonight အစီအစဉ်ရိုက်ကူးနေမှုများ
- ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ(၂၁)ရက်နေ့က Lavender ထုတ်လုပ်ရေးကနေထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာကိုဇော်(အရုဏ်ဦး) ရိုက်ကူးထားပြီး သရုပ်ဆောင် ဇေရဲထက်၊အကယ်ဒမီဖွေးဖွေး၊ကျော်ကျော်တို့ပါဝင်ထားတဲ့ "သူ့ကိုမှ" ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကြိုတင်ခံစားမှု
- သူတို့ဘာလုပ်နေလဲ ?
လူငယ်သရုပ်ဆောင်အဆိုတော် အလင်းရောင် ရဲ့ (Oh ! My Crush) တေးစီးရီးအကြောင်းအပါအ၀င်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းတွေကို အဖွဲ့သားများမှ Indoor မှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားမှု
ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင်မှ နှင်းဆီစကားထာ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်ကူးမှုမပြုလုပ်ခြင်းအပေါ် စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ
ဇွန်လ(၁၉)ရက်နေ့က သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြန်ခေါ်သက်သေ အမည်ရှိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Press Show ပွဲမှမြင်ကွင်းများ
Moda Magazine အတွက် ဆန်းသစ်လ နဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်ကွင်းရိုက်ကူးခဲ့မှုများ
ဇွန်လ(၁၈)ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဟန်သီ (Fans Meeting) နဲ့သူ၏ပရိသတ်များတွေ့ဆုံခဲ့သည့်အစီအစဉ်
Gallery 65 မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Caricature Art Exhibition ပွဲအကြောင်းအရာများတို့နဲ့အတူ
တေးသံရှင် ဟော်နန်းဆု ရဲ့အယ်လ်ဘမ်အသစ်စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ
Thunder Art Exhibition ပန်းချီပြပွဲအခမ်းအနား
လူငယ် အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဟန်သီ နဲ့အထူးတွေ့ဆုံထားမှုအစီအစဉ်
-ဒါရိုက်တာကျော်ဇောလင်းရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ "ဆွဲစားမ၀တဲ့ ပွဲစားမ" ဇာတ်ကားလေးအကြောင်း
- ကိုလူပျို လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဇာတ်ကားရဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်ကပုံရိပ်တွေ
-"Royal Queen Video ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးတိုက်သစ်ဖွင့်ပွဲနှင့်သရုပ်ဆောင် ရွှေပန်းချီထင် ကိုမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား"
-- တေးသံရှင် မျိုးကြီးနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ Moda မဂ္ဂဇင်း Making
-- တေးသံရှင် Tharr Gyi ရဲ့"ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ" Audio CD စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ
-ဓါတ်ပုံအောင်ကျော်ထွန်း နဲ့ M ဆိုင်းလူ တို့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းမဂ္ဂဇင်း Making ကဏ္ဍ
- Info9ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးမှဇွန်လ (၁၈) ရက်နေ့မှာထွက်ရှိတော့မယ့် "မင်းရဲ့ကိုယ်…ကိုယ့်ရဲ့မင်း" ဗီဒီယိုဇာတ်ကားမှာဒါရိုက်တာကြည်ဖြူသျှင် ကကောင်းပြည့်၊မိုးဟေကို၊ကျော်ကိုကိုဝေ တို့နဲ့ဘယ်လိုတွေဖန်တီးပုံဖော်ထားသလဲ
- The Meeting of Colour and Line လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ပန်းချီပြပွဲအခမ်းအနား
- တေးသံရှင် နန်းကေဇက် ရဲ့ "တစ်ဖက်သတ်လိပ်ပြာ" တေးစီးရီးသစ်မိတ်ဆက်ပွဲ
- 2016 Miss Myanmar International အတွက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
- ဗီဒီယိုရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ "ဒါရိုက်တာ ဗန်းကြီး ရဲ့ ""သရဲပါဆိုမှ"" ရိုက်ကွင်းမှာ - သရုပ်ဆောင် နေဒွေး၊နန်းခင်ဇေယျာ တို့နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့မှုပုံရိပ်
- MODA Magazine အတွက် သန္တာဗို နဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်မှမြင်ကွင်းများ
-"တစ်ယောက်တစ်မျိုး" လို့အမည်ပေးထားတဲ့ တေဇ ရဲ့တေးစီးရီးသစ်အကြောင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Promotion ပွဲ
- အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆန်းသစ်လ ရဲ့ (ခွေသစ်အတွက်ဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲ) Hit Interview ကဏ္ဍ
-အကယ်ဒမီဆုရ တေးရေးတေးဆို မောင်မောင်ဇော်ထက် (ဓိရာမိုရ်) နဲ့"ဒါမြန်မာ" အမည်ရှိသီချင်းကိုအသံသွင်းခဲ့ကြသည့်အကြောင်းအရာများ
အနုပညာမိုးကောင်းကင် (၁၄ - ၆ -၂၀၁၆)
*ဓါတ်ပုံအောင်ကျော်ထွန်း ရဲ့ Perfect မဂ္ဂဇင်းအတွက် သန္တာဗိုလ် နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့မှုတွေ
* "မြန်မာ့ဂီတနေ့"" ကိုကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်အလင်္ကာကျော်
* မြင်ကွင်း မဂ္ဂဇင်းအတွက် မထက် နဲ့ဓါတ်ပုံလှိုင်ဗညား တို့ရိုက်ကူးခဲ့သည့် Photos Making
* Green Future Art & Environment festival ပန်းချီပြပွဲ
*ပိုင်ဖြိုးသု နဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာ ဥာဏတို့ရဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်ကပုံရိပ်အချို့
*"Info9ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးကနေဇွန်လ(၁၄)ရက်နေ့မှာထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီသွားမယ့် ဒါရိုက်တာမောင်ဗေဒါရိုက်ကူးထားပြီး အကယ်ဒမီလူမင်း၊အကယ်ဒမီရဲအောင်၊စူးရှ၊ယုသန္တာတင် တို့ပါဝင်ထားတဲ့ ""အရိပ်မဲ့သစ်ပင်"" ဇာတ်ကား
*M ထူး ရဲ့ "ချစ်လွန်းလို့ပါ" တေးအယ်လ်ဘမ်စာနယ်ဇင်းပွဲ
*Rran Life Machine "ကျေနပ်ပါ" အယ်လ်ဘမ်စာနယ်ဇင်းပွဲမှအကြောင်းအရာ
*သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေ ရဲ့သီလရှင်ဝတ်အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲမှပုံရိပ်များ
- ဒါရိုက်တာနေပိုင် "စမ်းချင်ရာစမ်းမောင်ဘဂျမ်း" ဗီဒီယိုရိုက်ကွင်းမှာ အကယ်ဒမီပြေတီဦး၊ရွှေသမီး တို့နဲ့ရိုက်ကူးနေမှုများ
- Miss Global Myanmar 2016 စာနယ်ဇင်းပွဲ
*တေးသံရှင် ဟံဝတီရဲ့ "HE ရဲ့ She" တေးစီးရီးစာနယ်ဇင်းပွဲ
*ဇွန်လ(၄)ရက်နေ့ကနေ(၁၂)ရက်နေ့အထိ Ahla Thit Art Gallery မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ့် Hunting Art Exhibition ပွဲ
ိအနုပညာမိုးကောင်းကင် [၉.၆.၂၀၁၆ ]
- တေးသံရှင် ၀င်းနောင် ရဲ့ "သီချင်းဆိုတဲ့ဇာတ်မင်းသား" စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ
- "ဂီတမောင်နှမများပရဟိတအဖွဲ့" ကနေကျင်းပတဲ့ရန်ပုံငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲပုံရိပ်များ
- ဥာဏ်ကြီးရှင်မဂ္ဂဇင်းမှတင်ဆက်သည့် 'ကလေးတို့ကမ္ဘာကိုချောင်းကြည့်ခြင်း'
- ပန်းချီဆရာ ဇွဲရန်နိုင်ရဲ့ Blanding Colours in Urban 5th Solo Exhibition ပွဲ
- "တေးသံရှင် တင်ဇာမော် ရဲ့ဇွန်လ(၁၈)ရက်နေ့တောင်ကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ့်ဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲအခမ်းအနား"
-"2016 Miss Myanmar World Winner ဆုရှင် မြတ်သီရိလွင် @Bella
နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Exclusive Interview"
-သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ "ကျွန်တော် ကျွန်မ ယောကျာင်္း ဗိုက်ကြီးသယ်" Press Show ပွဲဒါရိုက်တာကိုဇော်(အရုဏ်ဦး)၊ဇေရဲထက်၊ရာဇာနေ၀င်း၊ထွန်းထွန်း၊အကယ်ဒမီစိုးမြတ်သူဇာ၊ရွှေမှုံရတီ)
- "တစ်ယောက်တစ်မျိုး" အမည်ရှိတေးစီးရီး Albm စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား
- တေးသံရှင် ဝေယံမင်း(4MAKAN ) ရဲ့ Plastic တေးစီးရီးစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ
- Shwe FM6နှစ်ပြည့် MTV/ DVD Karaoke အခွေထွက်ရှိခြင်းအခမ်းအနား
- Miss Myanmar World 2016 Grand Final ပွဲကြီးအခမ်းအနား
Info9ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးမှ ဇွန်လ 3ရက်နေ့မှာဖြန့်ချီခဲ့တယ့်ဇာတ်ကားကတော့ "ပြုံးနေရင်သတိထားယောက်ဖရေ" ဗီဒီယိုဇာတ်ကား
-"ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင်ရဲ့ "Angel of Vengeance"ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးနေမှုများ (သရုပ်ဆောင် သက်မွန်မြင့်၊နန်းဆုဦးဖြိုးငွေစိုး နှင့်အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာ)"
-ဓာတ်ပုံအောင်ဇော်ရိုက်ကူးသော အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေမှုများ
-အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းရဲ့ မွေးနေ့အလှူ
-တေးသံရှင် မိုးပြည့်ပြည့်ရဲ့ "မရွာပါနဲ့မိုး" Audio/ CD တေးစီးရီး စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ
-သာမောဝေစည် ငွေတောင်ပြည် ပန်းချီပြပွဲအခမ်းအနား
-တေးသံရှင် နေဦးကိုကို၊မင်းမြတ်၊နေထူး၊Candy၊ မေဆက်၊ရတနာအိန်ဂျယ် တို့ရဲ့ "ချောကလက်အိမ်" တေးစီးရီး စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ
- မြစ်သုံးစင်း Art Exhibition ပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်း
- မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံးသိပ္ပံရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သော Ananda: Rise of Notra ဇာတ်ကားစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ
-"The Eyes Entertainment မှစီစဉ်သည့် Night of Distortion Rock Concert (Wanted,Idiots,Saran )အပါအ၀င် ရှေ့ဆက်မည့်အနုပညာဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း
- တေးသံရှင် ဝေလရဲ့ "အဓိပတိဖွား" Audio /CD စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ
- ဓာတ်ပုံလှိုင်ဗညားရဲ့ "Miss Moda " ကဏ္ဍအတွက် Model မော်ရိန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေမှုများ
-Miss Myanmar World 2016 (Mr. Brian Training for Final Stage)
- တေးသံရှင် လင်းZ ရဲ့ "မြားတစ်စင်း" တေးစီးရီးမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား
-Junior Planet Kid Art Show
-နန်းခင်ဇေယျာ (Non Stop DVD အခွေထွက်ရှိမယ့်အကြောင်း)
-Bro G "New Age " Album Promotion ပွဲအခမ်းအနား
-မထက် (ပရိသတ်တွေ အားပေးမှုကိုထပ်မံရရှိခဲ့ရင် အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြိးဘာတွေလုပ်သွားဖို့ရှိလဲ)
-International Book Fair ပွဲအခမ်းအနား
-90's Kids Charity ပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်း
-Short News (2016 မူဆယ်မြို့၏အခမ်းအနားဆုံးဖျော်ဖြေပွဲကြီး)
-တေးသံရှင် ခင်စုစုနိုင်ရဲ့ "ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူး"တေးအယ်လ်ဘမ် စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ
-"ဓာတ်ပုံအောင်ဇော်ရိုက်ကူးသော သရဖူမဂ္ဂဇင်းရဲ့ အဖေများနေ့ကဏ္ဍအတွက်အဆိုတော် ရန်ရန်ချမ်းသားအဖနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေမှုနဲ့အတူ နုပျိုခြင်းမှရင့်ကျက်ခြင်းဆီသို့ ကဏ္ဍအတွက်သရုပ်ဆောင်ခင်ဇာခြည်ကျော်နဲ့
-"Ingo -9 ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးမှ မေလ ၂၇ရက်နေ့မှာ ""ဟဲ့""အမည်
ရှိဗီဒီယိုဇာတ်ကား ဒါရိုက်တာသားညီ၊ သရုပ်ဆောင် ရဲရင့်အောင်၊သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း၊ညီဂျော်၊မျိုးမျိုးခိုင်"
-"ဒါရိုက်တာ သားညီရဲ့ ""အမုန်းတွေခေါက်ထားလိုက်"" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးနေမှုများသရုပ်ဆောင် နေတိုး၊ရဲအောင်၊မိုးဟေကို၊မြတ်ကေသီအောင်၊တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ ပါဝင်သောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေမှုများ"
-"NO PAR" ရုပ်ရှင်ကန်တော့်ပွဲနှင့် သရုပ်ဆောင် ဟိန်းကိုကိုကျော်အားစာနယ်ဇင်းအပ်နှံပွဲအခမ်းအနား
(Shwe Kit & Her Fans) ပွဲအကြောင်း"
-တေးရေး၊တေးဆို စစ်ဟိန်းရဲ့ "မြတ်ချယ်ရီ" DVD Karaoke တေးစီးရီးမိတ်ဆက်ပွဲ
- Human Nature ဓာတ်ပုံပြပွဲ
- "တေးသံရှင် အမွန်း (Automatic တေးစီးရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားထားမှုများ
- "ဓာတ်ပုံအောင်ဇော်ရိုက်ကူးသော သရဖူမဂ္ဂဇင်းရဲ့ အဖေများနေ့ကဏ္ဍအတွ
က်အဆိုတော် ရန်ရန်ချမ်းသားအဖနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေမှုနဲ့အတူ နုပျိုခြင်းမှရင့်ကျက်ခြင်းဆီသို့ ကဏ္ဍအတွက်သရုပ်ဆောင်ခင်ဇာခြည်ကျော်နဲ့
- သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဇေရဲထွန်း ရဲ့ မွေးနေ့အလှူမင်္ဂလာအခမ်းအနား
-သရုပ်ဆောင် စံရတီမိုးမြင့်ရဲ့ အချစ်ရေး
- ဓာတ်ပုံ ဂျေဆင်ရိုက်ကူးသော Fashion Magazine အတွက် Model မြနှင်းရည်လွင်နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေမှုများ
-အကယ်ဒမီကျော်သူ (ကံငါးပါးမလုံရင် ပရဟိတလုပ်လို့ ရ၊မရ)
- ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ လတ်တလောသူ့မရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ
-Photo Gra Five Photo ပြပွဲအခမ်းအနား
- လတ်တလောအနုပညာရှင်များရဲ့ လတ်တလောသူတို့ဘာလုပ်နေလဲ အကြောင်းအရာ
ဒါရိုက်တာသားညီရိုက်ကူးတဲ့ "စိတ်ရဲ့ အငြိ" လို့ နာမည်ပေးထားတယ်၊ဒီဇာတ်ကားထဲမှာပါဝင်ကြတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေက ဘယ်လို ကာရိုက်တာတွေနဲ့ ရိုက်ကူးနေလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ တော့ကောင်းတယ်...
ဒီနေ့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပွဲအခမ်းအနားများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လှည်းတန်း စင်တာ မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ X-Boxing ရဲ့ Promotion ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ လှည်းတန်း စင်တာကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ X-Boxing ရဲ့ ပရိသတ်တွေဘယ်လောက်များလဲဆိုတာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်.....
-တေးသံရှင် သားသားရဲ့ "မိန်းမနိုင်နည်း" တေးအယ်လ်ဘမ် Audio/CD Promotion ပွဲအခမ်းအနား
-သရုပ်ဆောင် ဇေရဲထက် (သရုပ်ဆောင် အလုပ်အပြင် သီချင်းဆိုဖို့ ရှိ ၊ မရှိ)
-ဓာတ်ပုံအောင်ဇော်ရိုက်ကူးသော Moda Magazine အတွက် Model လိမ္မော်သီးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေမှုများ
-သရုပ်ဆောင် ဇေရဲထက် (သူ့အနေနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ် သူ့ရဲ့သဘောထားအမြင်)
(YGN EDM Festival) ပွဲအကြောင်း"
-တေးသံရှင် မာရဇ္ဇရဲ့ "အချိန်အခါ"အမည်ရှိ တစ်ကိုယ်တော်တေးစီးရီးစာနယ်ဇင်း မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား
- "ဒါရိုက်တာ ဇေပါရိုက်ကူးသော "" ခါးတောင်းကျိုက်မိန်းမနဲ့ တောင်ရှည်ဝတ်မင်းယောက်ျား"" ဗီဒီယိုဇာတ်ကားမှာသရုပ်ဆောင်များအဖြစ် ဖြိုးငွေစိုး၊နေဒွေး၊၀င့်ယမှုံလှိုင်၊ဆင်မ ပါဝင်သောဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေမှု"
-"Info -9 ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးမှ မေလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ""အဖြူရောင်ဝိညာဉ်အပိုင်းအစများ""အမည်
ရှိဗီဒီယိုဇာတ်ကား ဒါရိုက်တာပြည်ဟိန်းသီဟ၊ သရုပ်ဆောင် ဇေရဲထက်၊၀တ်မှုံရွှေရည်၊မိုးခမ်း၊အုန်းသီးဟားတစ်သိုက်"
- "တည်ဆောက်စို့" အမည်ရှိတေးစီးရီး Audio/CD အခွေထွက်ရှိခြင်းစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ
- "ဓာတ်ပုံသိန်းဇော်ဝင်းရိုက်ကူးသော Fashion Magazine ရဲ့ Make-Up ကဏ္ဍအတွက် Model ခင်သဇင်၊Alice- Ong တို့နှင့် ရိုက်ကူးနေမှုများ"
-"တေးသံရှင် စောယွန်းသီရိရဲ့ ""တံဆိပ်ရှိတယ်"" အမည်ရှိ DVD/ Karaoke တေးစီးရီးမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား"
- နေဒွေး (2016 ခုနစ်အတွင်းမှာ ရာဇာဝင်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့ ရှိတဲ့အကြောင်း)
- တေးသံရှင် မေဖြူဖြူရဲ့ဒုတိယမြောက် "မာယာဝင်္ကပါ " တေးစီးရီး Audio CD စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ
-"ဒါရိုက်တာ ပွင့်သိင်္ဂီဇော် ရိုက်ကူးသော ""ခြေရာတစ်စုံ"" ဗီဒီယိုဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေမှုမှာ သရုပ်ဆောင်များအဖြစ်အကယ်ဒမီနေတိုး၊နန်းဆုဦး တို့နှင့်ရိုက်ကူးနေမှုများ"
- ဓာတ်ပုံ မင်းကိုရဲ့ "မြင်ကွင်း" မဂ္ဂဇင်းအတွက် Photo Shooting Making (Model Tyron)
- Coca' Cola နှင့် ဆုံဆည်းချိန် ဖျော်ဖြေပွဲအကြောင်း
- တေးသံရှင် အောင်ဆိုင်းဒူရဲ့ "အနမ်းများရဲ့ လက်ဆောင်" Audio/CD စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား
-Miss Myanmar World 2016အလှမယ်များ ဒလမြို့ရှိ ရေရှားပါးသောဒေသများသို့ သောက်သုံးရေ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း
- Info Digest Journal စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်း
-"ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင်ရဲ့ ""အနန္တ"" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးနေမှုမြင်ကွင်းများ(သရုပ်ဆောင်များအဖြစ် ဖြိုးငွေစိုး၊စိုးရန်အောင်၊နန်းဆုဦး အခြားသရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာ )
-"Miss Myanmar World 2016 အလှမယ်အယောက် ၂၀ အား မြန်မာဝတ်ဆုံများဖြင့် ကန်တော်ကြီးမျှော်စင်ကျွန်းတွင် အလှဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေမှုများ
- "Phantom Entertainment မှ ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းတွင် (ပထမဆုံး)ကျင်းပပြုလုပ်မည့် First Step ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ"
- တေးသံရှင် မနောရဲ့ "အဆင်ပြေတဲ့နေ့" အမည်ရှိတေးစီးရီးအယ်လ်ဘမ် စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား
ကန်တော့ပွဲပေးအခမ်းအနား(သရုပ်ဆောင်များ ရန်အောင်၊မင်းမော်ကွန်း၊ မို့မို့မြင့်အောင်၊ဇွဲပြည့်)"
- "ဒါရိုက်တာ ဂျိုးရိုက်ကူးသော ""528 Game "" အမည်ရှိဗီဒီယို ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေမှုမှာသရုပ်ဆောင်များအဖြစ် အကယ်ဒမီထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ရတနာဖြူဖြူအောင်၊ဇွဲမှူးသစ် တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ရိုက်ကူးနေမှုများ"
-သရုပ်ဆောင် ရွှေမှုံရတီ မွေးနေ့ပွဲ
-တေးသံရှင် ပိုပိုရဲ့မွေးနေ့အလှူမင်္ဂလာ အခမ်းအနားမြင်ကွင်း
- မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ ရုပ်ရှင်လောကသားများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်း
-ဆရာလင်္ကာရည်ကျော် ရဲ့ရေးသူဖတ်သူဆွေးနွေးပွဲနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနား
-"ဒါရိုက်တာ ခင်စောမျိုးရဲ့ ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာဆိတ်ဖွားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အထူးပွဲပြသခြင်းအခမ်းအနား
-"MWD Documentary and Entertainment Channel ရဲ့ထုတ်လွှင့် မှုဧရိယာ တိုးချဲ့အစီအစဉ်နှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်အကြောင်းစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား"
-"တေးသံရှင် စံလင်းရဲ့ ""ညဥ့်သုံးယံ "" အခွေထွက်ရှိခြင်းစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ ၊Bo Bo Music Production မှ Single Album ထုတ်ပေးမည့်အဆိုတော်အသစ်နှစ်ဦးအားမိတ်ဆက်ပွဲနှင့် Bo Bo Anniversary Audio CD Vol-1/2 အခွေထွက်ရှိခြင်းအခမ်းအနားမြင်ကွင်း